Watchtower RAIBHURARI YEPAINDANETI Yokushandisa Pakutsvakurudza | Bhuku Regore ra2014
Musi wa28 June 2013, jw.org yaiva nechiziviso chokuti Watchtower RAIBHURARI YEPAINDANETI yakanga yava kuwanika mumitauro 100. Watchtower RAIBHURARI YEPAINDANETI inoita kuti munhu akwanise kutsvakurudza sezvaanoita paWatchtower Library, inowanika paCD-ROM. Inogonawo kushandiswa pamidziyo yakawanda inoenda paIndaneti, yakadai sekombiyuta kana kuti laptop, tablet, kana kuti smartphone. Zvinyorwa zvakawanda zviri paraibhurari yacho zvine misi inobvira mugore ra2000 zvichienda mberi. Panewo Shanduro yeNyika Itsva uye Insight on the Scriptures mumitauro yakawanda. Pakanzi Tsvaga panogona kushandiswa kutsvaka shoko, chikamu chemashoko, kana kuti mashoko anoenderana, sezvinogona kuitwa paWatchtower Library. Uchishandisa raibhurari iyi yepaindaneti, unogona kutsvakurudza magwaro kana kuti mashoko mune mumwe mutauro wobva waita kuti zvaunenge watsvakurudza zvacho zvibudewo mune mumwe mutauro panguva imwe chete. Aya ndemamwe mashoko okuonga raibhurari iyi inobatsira zvikuru pakutsvakurudza:
“Ndinokutendai zvikuru neWatchtower RAIBHURARI YEPAINDANETI. Ndakafara chaizvo pandakaona raibhurari iyi itsva inobatsira pakudzidza. Handina kana karuzivo zvako nezvekugadzira mapurogiramu ekombiyuta kana kuti zveWeb design, asi ndinonyatsoona kuti raibhurari iyi ndeyemhando yepamusoro. Zvinonyatsoratidza kuda kwamunoita muvakidzani, hama dzenyu, uye Jehovha. Kugadzirwa kweWatchtower RAIBHURARI YEPAINDANETI kunonyatsoratidza kuti mune hanya. Handina kumbobvira ndafunga kuti ndaizowana chipo chakanaka zvakadai chinoratidza rudo uye rupo kubva kuna Baba vangu vokudenga, Jehovha. Ndinokutendai zvikuru.”—A., Argentina.
“Zvandishamisa chaizvo! Nhasi masikati ndaenda paWatchtower RAIBHURARI YEPAINDANETI, uye pamitauro mitsva yanga iripo panga painewo Haitian Creole. Handina kumbobvira ndafunga kuti izvi zvaizoitika. Zviri pachena kuti kubva mutsamba ino munogona kuona kuti ndiri kutopererwa nemashoko. Dai Jehovha akakomborera zvose zvamuri kuita, uye dai mudzimu wake mutsvene ukaramba uchikutungamirirai.”—D.C., United States.